“एकैछिनम ७० लाख स’खाप भएपछि बाउ,छोरा रुदै मिडियामा” – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
“एकैछिनम ७० लाख स’खाप भएपछि बाउ,छोरा रुदै मिडियामा”
7 months ago मेचीमहाकाली संवाददाता
“गुल्मी । गुल्मीका एक व्यावसायिक युवा सौभाग्य शाहको बाख्राको खोरमा आ’ग’ज’नि भएको छ । सौभाग्य शाहले विदेशलाई त्या’गेर स्वेदश मै केही गर्ने उद्येश्यले व्यावसायिक रुपमा बाख्रा पालन गरेका थिए ।
“उनले आफ्नै देशमा केही गर्ने सोंचका साथ आफुलाई बाख्राको गोठालो बनाएका थिए । तर उनको यो कामलाई एकैछिनमा ख’रानी ब’नाईएको छ । उनको बाख्राको फर्मममा आ’गो ल’गा’ई’एको छ । आ’गो कस्ले ल’गायो यो अझैं पत्ता लाग्न सकेको छैन ।
“तर आ’गो’ले सौभाग्यको बाख्रा फर्म ज’ले’र पु’र्ण रुपमा न’ष्ट भएको छ । बाख्रा पालनबाट मनग्य आम्दानी गरेर आफ्ना गाउँका युवाहरुलाई केही रोजगारी दिने सौभाग्यको सपना बाख्राको खोर झैं ड’ढे’र च’क’ना’चुर भएको छ ।
“घरको तलपट्टी बनाईएको बाख्राको खोरमा राति सुतिरहेका सौभाग्य र उनका परिवारलाई पे’ट्रो’लको ग’न्ध आएपछि उनीहरु केको ग’न्ध हो भनेर बाहीर निस्किंदा तल रहेको बाख्राको खो’रमा आ’गो’ द’न्कि रहेको थियो । त्यो दृश्य देखेर ‘अ’त्ता’लिदै सौभाग्य र उनका परिवार तल झ’र्दाझ’र्दै सबै न’ष्ट भईसकेको थियो ।
“सौभाग्य वडा अध्यक्षका छोरा पनि हुन् । उनले बाख्राको खोरमा आ’गो ला’गेको थाहा पाएर दौ’डिंदै खोरको ढोका खोल्दा आगोको ल’प्कोले उनको मुखको एकापट्टीको भाग स’मेत ड’ढा’एको छ । उनका सबै सपना उनैको आखाँ अगाडी ज’ले’र न’ष्ट त भयो भयो साथै उनी आफु पनि ज’ले’का छन् ।
“आफ्नै आखाँ अगाडी बोल्न नसक्ने ती अबोध जनावरले छ’टप’टिदै प्रा’ण त्या’गे’को दृश्यले सौभाग्यलाई निकै नै पि’रोलेको छ । यो पि’डा यतिबेला जति सौभाग्यलाई छ उत्ति नै उनका सबै परिवारलाई पनि छ ।
Previous “बाउ छोरीको भित्री सम्बन्ध बारे खुलाईन यी युवतीले भित्रि पोल, अतालिदै बिनयकी,श्रीमती,ले पनि खोलिन पोल। भिडियो अन्त्य सम्म हेर्नुस् ।
Next “अचानक के भयो कञ्चनलाई…एक्कासि कञ्चनले हजुरआमा,लाई यसो भने-भिडियो हेर्नुहो।
अन्तरजातिय विवाह गरेका यी जोडी मिडियामा, सुरुसुरुमा गा’ली खाए, बच्चा जन्माउने यस्तो तयारी भन्दै हँसाए(भिडियोसहित)
5 mins ago Mechi Mahakali
भो’कभोकै यति सानो दुई महिने बच्चा यसरि रुँदै ,कठै! के हुँदै छ ?(भिडियो’सहित)
29 mins ago Mechi Mahakali
पतिले प’त्निलाई गम्भिर आ’रोप लगाउँदै छोराछोरी समेत आफ्ना है’नन् भनेपछि… (भिडि’योसहित)
54 mins ago Mechi Mahakali
सुन्दा अचम्म लाग्ने सत्य खबर -अस्ट्रेलियाको एकतर्फी हवाई भा’डा १२ लाख
38 mins ago Mechi Mahakali